बिरालोको चिप्लिएका आँखाहरू कसरी धोउने Noti बिरालाहरू
बिरालोको चम्केका आँखाहरू कसरी धुने? प्राय: जसो उनीहरूको आँखामा भएका समस्याहरू संक्रमण हुन समाप्त हुन्छ र ठूला रोगहरूबाट जोगिन वा प्रत्येक प्रकारको समस्याको लागि संकेत गरिएको थोत्रो सल्लाह दिनको लागि उनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह दिइन्छ। सानो बिरालोको बच्चाको मामलामा, विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ कि तिनीहरू तिनीहरूसित टाँसिदैनन्, किनकि तिनीहरू एक उमेरमा जब तिनीहरू दर्शनको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
अर्को म तिनीहरूलाई कहिले र कसरी सफा गर्ने भनेर वर्णन गर्दछु, र अधिक, तपाईंको चार खुट्टाका साथीहरूको आँखा राम्रोसँग हेरचाह गर्न।
1 बिरालोको आँखाबाट दाग कसरी हटाउने?
1.1 कसरी बिरालोको आँखालाई क्यामोमाइलले सफा गर्ने?
1.2 कसरी सीरमको साथ बिरालाको आँखा सफा गर्ने?
1.3 कसरी बच्चा बिरालाको आँखा सफा गर्ने?
2 के गर्ने यदि मेरो बिरालोको एउटा आँखा बन्द छ र त्यसले करायो?
3 किन मेरो बिरालोको नराम्रो आँखा छ?
3.3 बिरालाहरुमा नेत्रश्लेष्मलाशोथ
बिरालोको आँखाबाट दाग कसरी हटाउने?
ती चिप्लिएका आँखाहरू, विशेष गरी स्रावहरू र लेग्यास भनेर चिनिने मानवलाई धोउनको लागि यसलाई अत्यन्त कौशलतासाथ गर्न सिफारिस गरिएको छ, समात्नुहोस् न्यानो पानीमा भिजाउने कपडा र उसको आँखा सफा गर्नुहोस् धेरै नाजुक रूपमा, कपडाहरूलाई जति पटक चाहिन्छ त्यति पटक धुनुहोस् जबसम्म यो पूर्ण रूपमा स्रावबाट मुक्त हुँदैन। यदि तपाइँ त्यो देख्नुहुन्छ scabs वा जल निकासी जुन धेरै टाँसिएको हुन्छ तपाईं न्यानो पानी कम्प्रेस लागू गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई नरम बनाउन र यिनीहरूलाई अझ राम्रोसँग लिनुहोस्, थप रूपमा यी न्यानो कम्प्रेसहरूले बिरालाले महसुस गर्न सक्ने जलनलाई शान्त पार्छन्।
यो सफाई दिनमा दुई पटक गर्नुपर्दछ, बिहान र रात यदि यसको विपरित, केही दिन पछि हामीले देख्यौं कि विसंगति समाधान गरिएको छैन, यो पशु चिकित्सकमा जाने समय हो किनकि यो नेत्रश्लेष्मलाशोथ हुन सक्छ वा कुनै अन्य आँखा रोग र विशेष ड्रप वा एक निश्चित एन्टिबायोटिकको आवश्यक छ जुन पशु चिकित्सकले संकेत गर्नु पर्छ।
जहाँसम्म बिरालाका बच्चाहरूलाई तपाईं धेरै सावधान हुनु पर्छ किनकि सबै आँखा रोग संक्रामक हो। राम्रो स्वच्छताले कुनै पनि समस्या बिना यीको उचित बृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ, विशेष गरी आँखामा, सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र जब तिनीहरू यति सानो हुन्छन् किनभने कुनै पनि पदार्थ वा सूक्ष्मजीवले उनीहरूलाई असर गर्न सक्छ।
अर्कोतिर आमा सधैं धेरै स्वच्छ हुनुपर्छ, किनभने बिरालाको बच्चाहरूलाई खुवाउँदा यो धेरै जोडिएको हुन्छ र कुनै पनि फोहोरले उनीहरूलाई संक्रमण लिन सक्छ।
कसरी बिरालोको आँखालाई क्यामोमाइलले सफा गर्ने?
क्यामोमाइल एउटा बोट हो जसमा धेरै औषधीय गुणहरू छन्, सबैभन्दा राम्रो एन्टी-इन्फ्लेमेटरी र एन्टिसेप्टिकको रूपमा परिचित छ, त्यसैले यो आँखा समस्याहरूका लागि उपचारको रूपमा प्रयोग गर्दछ, जस्तै नेत्रश्लेष्मलाशोथ। साथै, यो बिरालाको लागि हानिकारक छैन।
तसर्थ, यदि एक दिन तपाइँले लेगास देख्नुभयो भने, तपाइँले गर्नुपर्ने भनेको क्यामोमाइलको इन्फ्युजन तयार गर्नुपर्दछ (या त झोलामा वा १ कप पानीमा फूलको एक चम्चाको साथ), पानीलाई फोकामा ल्याउनुहोस् र यो थोरै चिसो। यो तातो हुनुपर्दछ, लगभग ºº डिग्री सेन्टिग्रेडमा। त्यसोभए, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ सफा धुप लिनुहोस्, यसलाई निलयमा ओसिलो बनाउनुहोस्, र त्यसपछि लेगास हटाउनुहोस्.
महत्वपूर्ण: प्रत्येक आँखाका लागि धुंध प्रयोग गर्नुहोस्। यो एक अवस्था अर्कोको भन्दा स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ, तर पक्कै पनि, दुबैको लागि उही प्रयोग गर्दा, बिरामी आँखा त्यो रोगलाई स्वास्थ्यवर्धकमा पारित हुन सक्छ। र त्यो मात्र हो जुन सबै हालतमा बेवास्ता गर्ने।
कसरी सीरमको साथ बिरालाको आँखा सफा गर्ने?
यदि तपाइँ यसलाई क्यामोमाइल भन्दा पहिले प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यसलाई समस्या बिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पानीमा ०.0,9% सोडियम क्लोराइड भन्दा बढि केहि छैन, र प्राय: जसलाई सामान्य नुनको रूपमा चिनिन्छ। यो दुबै मानिस र बिरालाहरूका लागि धेरै उपयोगी छ।
अगाडि बढ्ने तरिका सरल छ गज राम्रोसँग भिजाउने प्रत्येक आँखा को लागी एक नयाँ को उपयोग गर्नका लागि याद गर्नुहोस्- र legañas हटाउनुहोस्.
कसरी बच्चा बिरालाको आँखा सफा गर्ने?
जब बिरालाको बच्चा बच्चा हो, तिनीहरूलाई सफा गर्ने उत्तम तरिका हो यसलाई तौलिया वा कम्बलले लपेट्दै, उनको टाउको बिस्तारै तर दृढतापूर्वक समात्नु, र त्यसपछि गोजलाई पार गर्दै उसको सानो आँखामा क्यामोमाइल वा सीरममा गीला।
के गर्ने यदि मेरो बिरालोको एउटा आँखा बन्द छ र त्यसले करायो?
यो केहि गम्भीर हुनु आवश्यक छैन, तर सम्भावित कारणहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ:
स्प्लिन्टर्स वा केहि विदेशी वस्तु
त्यहाँ विभिन्न कारणहरू छन्, के गर्न पहिलो कुरा हो उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् किनभने यदि उदाहरणका लागि उसलाई के हुन्छ उसलाई विदेशी वस्तु रहेको छ भने उसले विशेष चिम्टी लगाएर वा मलम वा आँखाको थोपाहरू हटाएर यसलाई हटाउन सक्छ।
घटनामा कि उसलाई परागकण र / वा धुलोबाट एलर्जी छ, उसले तपाईंलाई केहि संकेत दिन्छ ताकि ऊ राम्रो छ; साथसाथै तपाइँलाई तपाइँका लक्षणहरूलाई कम गर्न खोप पनि दिन सक्नुहुन्छ।
र यदि के भएको छ भने तपाईंले शैम्पू वा विषाक्त उत्पादनको थोपा छोड्नुभयो भने, तपाईंलाई औषधी दिइनेछ जसले तपाईंलाई आँखा सफा गर्न र तपाईंलाई महसुस गरिरहेको असुविधा कम गर्नमा मद्दत गर्दछ। केवल साँच्चै गम्भीर मामिलाहरूमा, जसमा नेत्रगोल बिग्रिएको छ, उसले यसलाई हटाउने छनौट गर्दछ।
किन मेरो बिरालोको नराम्रो आँखा छ?
त्यहाँ बिरालालाई असर गर्ने धेरै रोगहरू छन्, जस्तै:
यो आँखामा असामान्य दबावको कारण हुन्छ, नेत्रगोल भित्र भित्र तरल पदार्थ संचय को कारण। प्रक्रिया केहि दिन देखि केहि हप्तामा लाग्छ, र यदि उपचार नगरी छोडियो भने यो यति खराब हुन सक्छ कि तपाईंले आफ्नो आँखा हटाउनुपर्दछ। थप जानकारी यहाँ.
यो एक जीवाणु रोग हो जसले आँखाको सूजन र रातोपन निम्त्याउँछ। To देखि months महिना सम्मका युवा बिरालाको बच्चाहरू विशेष गरी कमजोर छन्, साथै उनीहरू जो तनाव र / वा सडकमा बाँचिरहेका छन्।
यो एन्टिबायोटिकको साथ उपचार गरिन्छ, र जनावरहरूलाई सही खोप लगाएर र स्वच्छ र सुरक्षित ठाउँमा राख्छ।
यो कन्जेक्टिवा झिल्लीको लालिमा र सूजन हो, जुन पानी र स्पष्ट वा प्यूरोलेन्ट स्राव र धेरै खुजलीको साथ हुन्छ। यसैले, बिरालाले बारम्बार स्क्र्याच गर्दछ, जसले घाइते बनाउन सक्छ। उपचारमा नेत्रका थोपाहरूको केही थोपा ड्रपहरू समावेश हुन्छ जुन तपाईंको पशु चिकित्सकले सिफारिस गर्दछ।
यो कोर्नियाको जलन हो। सबै भन्दा सामान्य लक्षण स्राव (गठिया) र पलक को सूजन हो। जनावर दुखाइमा छ र आँखालाई निरन्तर हेरफेर गरिरहेको हुन सक्छ। यो सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्छ।
यो आँखाको आन्तरिक संरचनाको सूजन हो। यो समस्या जहिले पनि मुख्य जस्तो देखिन्छ, जस्तै फिलिन ल्यूकेमिया, पेरिटोनिटिस वा अरू बीचमा फ्लाइन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस।
यसले लालिमा, प्रकाशप्रति अतिसंवेदनशीलता, विद्यार्थीको आकार र आकारमा परिवर्तन, अत्यधिक फाल्ने काम प्रस्तुत गर्दछ। यदि उपचार नगरिएमा यसले अन्धा तुल्याउन सक्छ। तपाईंसँग बढि जानकारी छ यहाँ.
यो आँखाको लेन्समा विन्दु हो जसले प्रकाशको रेटिनामा सीमित गर्दछ। जब हामी बिरालाहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, तिनीहरू प्राय: जसो संक्रमण वा घाइते, साथै मधुमेहको कारणले हुन्छ।
यसले पीडा गर्दैन, तर यसले स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्षम नभएको कारण केही असुविधा उत्पन्न गर्दछ। उपचारमा आँखाका थोपाहरू, वा शल्यक्रिया समावेश हुन्छ जब दुवै आँखा प्रभावित हुन्छन्। तपाईं अधिक जानकारी पाउनुहुनेछ यहाँ.
तपाईँले देख्नु भएको छ, तथ्य यो हो कि एक बिराला आँखा चिपकाएको कारण धेरै कारणहरु को कारण हुन सक्छ, त्यसैले म यो लेख तपाइँको लागी उपयोगी भएको छ। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी बिरालो धुनु पर्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिरालोको चम्केका आँखाहरू कसरी धुने
संसारमा भद्दा बिरालो के हो?